“ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ ခေတ်သစ်အာရုဏ်ဦး သန်းလာခြင်း” | ESD | Burmese
“ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ ခေတ်သစ်အာရုဏ်ဦး သန်းလာခြင်း”
June 13, 2018 rishi Commentry
သောတရှင်များခင်ဗျား၊ ဒီကနေ့ သတင်းဝေဖန်ချက် အခန်းကဏ္ဍမှာ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ဟောင်း ဆောင်းပါးရှင် Skand Ranjan Tayal ဝေဖန်ရေးသားပေးပို့ထားတဲ့ “ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ ခေတ်သစ်အာရုဏ်ဦး သန်းလာခြင်း” သတင်းဆောင်းပါးကို ဆက်လက်ဖေါ်ပြသွားမဲ့အတိုင်း တင်ပြအစီအရင်ခံပါရစေ။
လွန်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က စင်္ကာပူရ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Donald Trump နဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံခေါင်းဆောင် Mr. Kim Jong-un တို့အကြား သမိုင်းဝင် ထိပ်သီးညီလာခံဟာ ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်အပေါ် ခေတ်သစ်တခုရဲ့ အာရုဏ်ဦး ရောင်ခြည်တွေ သန်းစေခဲ့ပါတယ်။ စွမ်းအားရှင်နိုင်ငံတွေက ကိုးရီးယားပြည်သူတွေကို ခွဲခြမ်းခဲ့ပြီး၊ အသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ ၁၉၅၀ ခုမှ ၁၉၅၃ ခုနှစ်အထိ ကိုးရီးယားစစ်ပွဲနောက်ပိုင်း၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်၊ တရုတ်အပျော်တမ်းလက်နက်ကိုင် ကြည်းတပ်မတော်နဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားစစ်တပ်တို့အကြား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ ခေတ္တအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိဘဲ ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၂) လကျော်ကာလမှာ တောင်နဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားနှစ်နိုင်ငံစလုံးတို့မှ ပြည်သူတွေဟာ လမ်းလှိမ့်စက်ရထားကို စီးနှင်းခဲ့ရသလို တခါတလေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ စစ်အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး၊ တချို့သောအခါမှာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့ ရှေ့ရှု့လှုပ်ရှားနေဒါကို တွေ့မြင်ခံစားခဲ့ကြပါတယ်။ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတ Mr. Moon Jae-in ရဲ့ မြောကိုးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက် မနားမနေ ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံခေါင်းဆောင် Mr. Kim Jong-un ရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလှခဲ့တဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေဟာ ယခုနှစ်စောစောပိုင်းကစပြီး၊ ညီမျှခြင်းကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးသော ထင်ရှားတဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တခုကို လွန်ခဲ့တဲ့ ဧပြီလ (၂၇) ရက်နေ့မှာ သမ္မတ Mr. Moon Jae-in နဲ့ ခေါင်းဆောင် Mr. Kim Jong Un တို့အကြား ထိပ်သီးညီလာခံက စိုက်ထူခဲ့ဒါဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းဝင် Panmunjom Declaration ကြေငြာစာတမ်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကြီးပွားတိုးတက်ရေးနဲ့ ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ် ပြည်လည်ပေါင်းစည်းရေးစတဲ့အချက်တွေကို Trump-Kim ထိပ်သီးညီလာခံရဲ့ နောက်ခံကားချပ်အဖြစ် အသင့်ပြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့ ထိပ်သီးညီလာခံဟာ မျှောလင့်ထားခဲ့ဒါတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီညီလာခံမှာ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို တန်းတူအခွင့်အာဏာပေးအပ်ခဲ့ဒါမို့ ဒီအချက်ဟာ ပြုံယမ်းအစိုးရအတွက် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတခုဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတ Mr. Trump နဲ့ ဥက္ကဌ Mr. Kim တို့ဟာ တဦးကိုတဦး အပြုသဘောနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ကြပါတယ်။ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခန်းအနားမှာ သမ္မတ Mr. Trump က ဥက္ကဌ Mr. Kim နဲ့ တွေ့ဆုံရဒါက ကြီးမားတဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်တရပ်ဖြစ်ပြီး၊ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့အကြား အထူးနှောင်းဖွဲ့မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ မှတ်ချက်ချ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့အကြား နှုတ်အားဖြင့် အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြရာမှ အမှန်တကယ်ဘဲ ဇါတ်လမ်းဆန်လှတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာ ဘက်စုံပါဝင်တဲ့ သဘောတူစာချုပ်တခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး၊ ဒီစာချုပ်က ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့ လက်ရှိတင်းမာနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ သမ္မတ Trump က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေက အများထင်မြင်ယူဆဒါတွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့တယ်လို့ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သမ္မတ Mr. Trump က အနုမြူဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကို များမကြာမှီ စတင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စာမျက်နှာ (၁၂) ခုပါ တိုတောင်းတဲ့ သဘောတူစာချုပ်မှာ အသေးစိတ်တွေကို ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီစာချုပ်ဟာ အနာဂါတ်အတွက် ပြတ်သားတဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပန်းတိုင်က ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေးအတွက် ပူးတွဲကျိုးပမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းကဏ္ဍမှာ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအတွက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အာမခံမှုတခုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ တတိယပန်းတိုင်ကတော့ DPRK မြောကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အနုမြူဖျက်သိမ်းမှု အပြည့်အဝ ပြုလုပ်ရေးအတွက် ခံယူချက်တွေကို ရှေ့ရှုလုပ်ကိုင်ရေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီသဘောတူစာချုပ်မှာ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ဒါဏ်ခတ်ပိတ်စို့မှုတွေ ပယ်ရှားရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး တစုံတရာမျှ ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ သမ္မတ Mr. Donald Trump က မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအပေါ် ဆန့်ကျင်ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက DPRK မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အနုမြူဆိုင်ရာတွေ အသုံးမဝင်တော့ဘူးလို့ အသေအချာသိရှိတဲ့အခါ ပယ်ရှားသွားလိမ့်မည်ဖြစ်တယ်လို့ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့ သဘောတူစာချုပ်ဟာ အကြောင်းအချက် အမျိုးများတို့အရ ၁၉၉၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ သမ္မတ Mr. Clinton ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်း မြောက်ကိုးရီးယားနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့အကြား ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ Agreed Framework for DPRK denuclearisation ရဲ့ ပြန်လည်ပေါက်ဖွားမှုတခုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီသဘောတူစာချုပ်ဟာ တဦးပေါ်တဦး ယုံကြည်မှုမရှိ အပြစ်တင်နေခဲ့ဒါကြောင့် ပျက်ပြားသွားခဲ့ရပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အဆိုပါထိပ်သီးညီလာခံရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ DPRK ကိုးရီးယားနိုင်ငံတို့အကြား ထိပ်သီးညီလာခံမှာ သဘောတူခဲ့ကြတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ပြီး ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်လျှက်ရှိပါတယ်။ အတိတ်ကာလက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ DPRK တို့အကြား မသမာတဲ့ အနုမြူနဲ့ ဒုံးက်ျာနည်းပညာ ဖလှယ်ရေးကွန်ယက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး သတိရတွေးတောလျှက် အိန္ဒိယနိုင်ငံက Korea ကျွန်းဆွယ် အရေးကိစ္စ ဖြေရှင်းချက်က အကျုံးဝင်လာမယ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အိမ်နီးချင်းမှ အနုမြူပြန့်ပွားရေး ဆက်နွယ်မှုတွေ ကမ်းလှမ်းနေဒါကို အာရုံပြုလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်နေပါတယ်။
အတိုချုပ်အားဖြင့် ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် ယခုသဘောတူစာချုပ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ကိုးရီးယားနှစ်နိုင်ငံအပေါ် လွှမ်းခြုံနေခဲ့တဲ့ စစ်ဖြစ်ရေးတိမ်လွှာတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့ဆက်ရမဲ့ လမ်းခရီးမှာ အထစ်အငေါ့တွေရှိလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံက ၎င်းရဲ့ အနုမြူစွမ်းရည်ကို လျော့ချက်ဘို့ ခိုင်မာတဲ့ခြေလှမ်းတွေ ချလိမ့်မဲ့အလျောက်တုံ့ပြန်သော လျော့ပေါ့သက်သာမှုတွေကို တောင်းဆိုမှာကြောင့်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် စသည်ဖြင့် ဆောင်းပါးရှင် Skand Ranjan Tayal ဝေဖန်ရေးသားထားတာကို နိဂုံးချုပ် အစီအရင်ခံ တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mrs Sushma Swaraj သည် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဒုဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သည့် Mr Didier Reynders နှင့် ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနှင့် ကျူးဘားနိုင်ငံတို့သည် ဇီဝနည်းပညာ၊ တိုင်းရင်းဆေးဝါးနှင့် ဓာတ်ကြမ်းကုသနည်း နယ်ပယ်တို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်သွားကြရန် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများကို လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြသည်။
Anantnag ခရိုင်ဒေသတွင် အကြမ်းဖက်သမား ၄ ဦးတို့ကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်လိုက်သည်။ Tral မြို့အတွင်း အကြမ်းဖက်သမား တိုက်ခိုက်မှုတွင် လုံခြုံရေးတပ်သား ၈ ဦးထက်မနည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသွားသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဆိပ်ကမ်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု